Olona an’arivony no tsy manan-kialofana noho ny fikaohan’ny tany amin’ny morondrano ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 17:52 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Français, Ελληνικά, 日本語, English
Tranobe difotry ny renirano Padma any Bangladesh. Pikantsary avy amin'ny YouTube an'ny mpisera TechTV BD.
Raha nahitana fikaohan'ny tany tsy mbola nisy toy izany hatramin'izay ny renirano tsitoha Padma any Bangladesh dia nanjavona ny faritra midadasika ao amin'ny faritr'i Dhaka ao Naria Upazilla any amin'ny distrikan'i Shariatpur.
Miatrika ny fitomboan'ny riandrano ny reniranon'i Padma taorian'ny rotsaka maharitry ny ranon'orana any amin'ny faritra ambony. Araka ny nolazain'ny Relief Web dia fianakaviana mihoatra ny 5.000 sy fihariana 500 mahery no namoy ny taniny sy ny fananany tao Naria tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tao anatin'ny herinandro, fianakaviana 3.000 tao amin'ny faritr'i Mokhtar Char no namoy ny zava-drehetra. Ankoatra ireo trano, lalana maro, tetezana, fiompiana, orinasa, fivarotana ary trano hafa tafiditra anaty rano.
Nitelina tanàna iray izay efa niorina nandritra ny 200 taona i Padma ary namotika ny tsena Mulfotganj ao Naria, Shariatpur any Bangladesh izay efa niorina 300 taona. Sary avy amin'i @ ShafiqAlam1, lehiben'ny Biraon'ny Dhaka, @AFP. pic.twitter.com/1W341YTErl
Nanolotra ny angon-drakitry ny zanabolana avy amin'ny Fanarahamaso ara-jeolojika an'i Etazonia ny Dataful.xyz tetikasa amin'ny alàlan'ny asa fanaovan-gazety tsy mitady tombontsoa iray, izay maneho ny fahitana fikaohan'ny Reniranon'i Padma ny tany nandritra ny folo taona farany. Mihevitra ny fikaohan'ny renirano ny tany ho toy ny loza misoko mangina ao Bangladesh ny federasiona iraisam-pirenena Vokovoko Mena sy Volantsinana Mena (IFRC).
Fahasimbana ara-potodrafitrasa goavana
Nisy horonantsary mampihetsi-po iray niseho tamin'ny aterineto momba ny fahavoazana goavana nateraky ny fihotsahan'ny tany manavatsava an'i Padma, ka tranobe iray no voatelina tao anatin'ny ny segondra vitsivitsy:
Namoaka vaovao momba ny fiantraikan'ny faharavan'ny tany tao amin'ny Facebook i Dr Nowfel Mahmud Bhuiyan, kandidà ho ao amin'ny sekoly ao amin'ny Tennessee Technological University:
Nanimba 0,4 kilaometatra toradroa teo akaikin'i Naria Upzilla (Shariatpur) ny renirano Padma tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Fandalinana haingana ny sary azo avy amin'ny zanabolana no nahitana fa moskea telo farafahakeliny, toeram-pitsaboana, sekoly iray ary banky iray no simba ampahany na manontolo noho ny renirano Padma. Mandritra izany fotoana izany, lalana manodidina ny 1,5 km sy trano an-jatony ary fotodrafitrasa an-jatony no very,na dia tsy mbola taonan'ny tondra-drano aza ny 2018 eo amin'ity faritra ity.
Ny fanombanana ny halehiben'ny fahasimbana vokatry ny fanapotehan'ny renirano Padma eo akaikin'ny bazarin'i Mulfatganj (Naria, Shariatpur) ny 11 septambra 2018. Natao tamin'ny fampiasana sary amin'ny zanabolana sy ny angona Google Earth ny fanadihadiana. Tsara homarihina koa fa tsy maintsy niova ny fahasimbana tamin'ity faritra ity nandritra ny fotoana nonomanana ity lahatsoratra ity satria mihodina isan'andro ny renirano Padma. Sary Credit Md N M Bhuyian, nahazoana alalana.
Matetika no miaina ny fahavoazana amin'ny fikaohan'ny tany noho ny fiovan'ny lalan'ny renirano ireo mponina eny amoron'ny reniranon'i Padma saingy mampahatahotra ny fanjavonan'ny faritra avaratr'i Naria tsikelikely.
20 kilometatra miala ny tetikasa tetezan'i Padma ilay toerana, tetezana lehibe indrindra ao Bangladesh izay andalam-panamboarana
Ezaky ny governemanta mora kianina
Nametraka kitapo sy gonim-pasika teo amoron'ny renirano Padma ny governemanta ao Bangladesh, saingy tsy ampy hifehezana ny safodrano sy nyatsanga izay mamakivaky ny fasika betsaka, mora miparitaka manerana ny morondrano izany. Nanomana tobin-traboina miisa 39 koa ny governemanta mba hanomezana sakafo sy fialofana ho an'ireo tra-boina.
Tany am-piandohan'ny taona 2018, nankatoavin'ny governemanta ny tetibola 255 tapitrisa dolara hisahanana ny programam-pitantanana ny fampiasam-bola amin'ny safo-drano sy ny fikaohan'ny tany mba ahafahan'ny biraon'ny Fampandrosoana ny resaka rano ao Bangladesh ahafahana manangana farafahakeliny 50 kilometatra amin'ny rafi-piarovana ny renirano ary hanavao ny handri-tany mirefy 89 kilaometatra fara-fahakeliny, tetikasa izay tsy mbola nanomboka mihitsy noho ny tondra-drano.
Manoratra ny mpisera M.A. Latif:
Nitohy nandritra ny roa taona ny fanapotehana nataon'ny renirano Padma, tsy misy ny fandraisana andraikitra hananganana tohodrano na handrintany ataon'ny mpitondra eo an-toerana. Efa voafoaka ny ampahany lehibe amin'ny toeram-pitsaboana Naria Upazila sy ny moske iray eo akaikin'ny hopitaly
Mieritreritra i Andriamatoa Latif fa tokony hilaza ny faritra ho iharam-boina ny governemanta ary ary manomboka mitari-drano sy handritany mba hisorohana ny fahavoazana hafa. Mampiseho ireo olon-tsotra miezaka manome fanavotana eo amin'ny renirano ity lahatsary manaraka ity
Fikaohan'ny morondrano: olana miraikitra lalina
Mitondra atsanga fasika vaventy, fasika ary ranon'orana nandritra ny vanim-potoanan'ny orana ny rano mirefy 24 000 kilaometatra amin'ny reniranon'i Bangladesh . Araka ny tatitra nivoaka tamin'ny volana Aogositra 2018 navoakan'ny NASA Fanarahamaso ny planeta tany, maherin'ny 66.000 hekitara (256 kilaometatra toradroa) no very noho ny fikaohan'a ataon'ny renirano Padma nanomboka tamin'ny taona 1967. Olona 200 000 fara fahakeliny isan-taona, no lasa mpitsoa-ponenana noho ny tany very vokatry ny fikaohan'ny riaka ny tany.
Manombana fahaverezan-tany mirefy 2270 hekitara any ho any ny fanadihadiana nataon'ny Foiben'ny Sampan-draharaha misahana ny Tontolo Iainana momba sy ny Jeografia (CEGIS) tamin'ity taona 2018 noho ny fikaohan'ny moron-dranomasina. Nahitana toerana 22 mety harefo eny amoron'ireo reniranon'i Jamuna, Ganges sy Padma ihany koa ny tatitra
Nanoratra tao amin'ny matoandahatsoratry ny Daily Star ry mpanao gazety Mohammed Norul Alam Raju sy Afroza Taznin:
Ny fandraisana an-tanana ataon'ny governemanta dia mifantoka indrindra amin'ny fandaharanasam-pampandrosoana sasantsasany toy ny fizarana fanampiana, ny famahanana ireo vondron'olona marefo (VGF), ny fampandrosoana marefo (VGD), sns kanefa matetika ireo programa ireo tsy mamaha olana, tsy mirindra, misy ambadika politika, vonjimaika ary tsy mahomby, iry noho izany dia maro ny zavatra mila fanatsarana amin'ny hetsika ataon'ny governemanta.
Tokony hampiditra ny fikaohan'ny morondrano ao anatin'ny fandaharan'asa dimy taona ny governemanta ary tokony hiorina amin'ny fomba famahana mazava ny olana izany.